Ụzọ TCDD okporo ụzọ na mpaghara YHT Map 2019 Ugbu a - RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraỤzọ okporo ụzọ okporo ụzọ TCDD na mpaghara YHT Map 2019
05 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 06 Ankara, Central Anatolia Region, Usoro okporo ụzọ okporo ụzọ, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Maps, Isi akụkọ, Turkey 0
ụgbọ okporo ígwè dị elu na-egosi map 1
TCDD Railway Nsoro na High Speed ​​Train (YHT) akara 2019 Map emelitere: Republic of Turkey State Railways (TCDD), na Regional Directorate nke Turkish State Railways na ụgbọ okporo ígwè e 2019-ụbọchị map na-egosi ókè-ala m rayhaber.coNa.
The Republic of Turkey State Railways (TCDD), na nke ugbu a map page ịkọrọ ha na gị. TCDD doziri map ahụ ma gosipụta ụzọ ụgbọ elu nke afọ ugbu a nke 2019. Maka ndị chọrọ inweta ozi gbasara ụzọ ụgbọ okporo ígwè na ụzọ okporo ụzọ, anyị na-eso gị kerịta ndị a. Mgbe TCDD na-ebipụta maapụ na-egosi ahịrị ụzọ ụgbọ okporo ígwè ọhụrụ, anyị ga-eso gị kerịta gị na weebụsaịtị anyị.
Pịa na map maka mkpebi dị elu.
Ndị nduzi TCDD REGIONAL 'MAP
TCDD Istanbul 1. Mpaghara, Ankara 2. Mpaghara, Izmir 3. Mpaghara, Sivas 4. Mpaghara, Malatya 5. Mpaghara, Adana 6. Mpaghara na Afyonkarahisar 7. Ndị na-ahụ maka mpaghara, gụnyere 7 Regional Directorate, nwere ụkpụrụ mpaghara ma jee ozi na mpaghara YHT na Ankara.
Na mkpokọta, 8 mejupụtara ngalaba yana eserese na-esote gosipụtara mpaghara nke mpaghara dị n'aka:
Turkey elu na-agba ụgbọ okporo ígwè (YHT) EZIOKWU MAP
Turkey mbụ na Ankara 2009 - 245 ya na-agba ụgbọ okporo ígwè dị n'etiti Eskisehir lKm, taa (February - Dị ka nke 2019) a gụnyere Konya na Istanbul na gafere akara ogologo xnumxkm'y na ngụkọta. Turkey elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè e, na-ewu nke elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè edoghi na ụgbọ ala edoghi nke na-ebu ndị njem njikọ anyị na-eso gị na map.
TCDD Railways Map 20 / 04 / 2018 TCDD Railways Map Ugbu a: A na-egosi gị TCDD Railways Map ugbu a na nnukwu mkpebi siri ike. I nwekwara ike ibudata maapụ World Railway ugbu a na weebụsaịtị anyị. TCDD Railway Map: TCDD ụzọ ụgbọ okporo ígwè ukara map ike ibudata site na ndị na-esonụ njikọ: Turkish State Railways Railway Maps map nke taps
Si Turkey-Europe Ro-La Train ụzọ gasị na Map 04 / 03 / 2012 N'ọdịnihu TCDD oké mkpa na-ebu ụdị Ro-La kee akụrụngwa nke njem na intensively ke akpatre afọ atọ ịkwaga bara ọrụ sürdürülmektedir.b onodu nke TCDD na Bulgaria, Romania, Serbia-Montenegro, Slovenia, okporo ụzọ ndị dị otú ahụ dị ka Hungary Railway Organization na UND na RODER pụrụ iche enwere ọmụmụ ihe na òkè nke ndị nnọchiteanya mpaghara. N'ihi nnyocha ndị a; Turkey si Europe Ro-La iga -Avustury nke Istanbul na imekọ ihe ọnụ onwe oru na uzo 3 n'okpuru (Wels ma ọ bụ Salzburg) na-zubere ka ulo oru n'etiti.
Ụfọdụ ụzọ ụgbọ ala na ụzọ ụgbọ elu ga-agbanwe na Eskişehir n'ihi ọrụ ndị e ji arụ ọrụ nke ndọtị ndọtị trolley 12 / 09 / 2012 Tram Lines Extension Metropolitan Municipality maka ọha iga n'ihi ọrụ owuwu Çamlıca-Batıkent na oru-71 Ụlọ bọs na minibuses e mere nwa oge mgbanwe njegasi. Metropolitan kwuru na nkwupụta si obodo, red 16, nwa 16, acha anụnụ anụnụ 17, 38, 77, nwa 15, acha anụnụ anụnụ 25, nwa 25, 43, 48 ụgbọ ala na 16 na nwa na-acha uhie uhie 7, 15, 25, 44 na ụzọ nke 57 nọmba tinyere ọ kọrọ na nwa oge mere dị iche iche. Tram Lines Extension Municipality nke mgbanwe mere n'okpuru Construction nke nkwupụta, e mere ndị na-esonụ: "nwa oge aku na ọha iga ụgbọ ala na tinyere ụzọ gasị ...
Newgbọ okporo ụzọ ụgbọ elu New York na ụzọ ụgbọ elu 12 / 04 / 2012 Ekpebisila usoro ọgbara ọhụrụ na nke havaray na okporo ụzọ ndị a ga-ewu na Istanbul. Eweputara ufodu oru ma ufodu n’ime ha na-aga n’ihu n’umu ihe omumu ha. Ebumnuche bụ ịkpụ ụgbụ ígwè ebe niile na Istanbul. Mgbe etinyere ahịrị ndị a, okporo ụzọ nke Istanbul ga-abụ akụkọ. Uzo ohuru metro na havaray echere na ha ga-ewu na Istanbul Beyoglu - Sisli Havaray Line: 5.8 km per hour: 33 puku mmadụ Dudullu - Bostanci Rail Sistem Usoro: 14 km kwa elekere: 70 puku ndị njem Pendik - Sabiha Gokcen - Sultanbeyli: 17 km - elekere: 70 km puku ndị njem Zeytinburnu - B.Paşa -GOP - Eyüp - K.Hane - Beşiktaş…
map okporo ígwè
Map nke okporo ụzọ okporo ụzọ
ụgbọ okporo ígwè ngwa ngwa guzergah map
konya eskişehir ụzọ okporo ụzọ map
Atlas nke TCDD
TCDD okporo ụzọ
TCDD chekwaa map
TCDD ụgbọ okporo ígwè map
ụgbọ okporo ígwè map
ụgbọ elu ụgbọ elu map
Map nke Na-aga n'ihu YHT Lines
YHT Map Map
Si Turkey-Europe Ro-La Train ụzọ gasị na Map
Ụfọdụ ụzọ ụgbọ ala na ụzọ ụgbọ elu ga-agbanwe na Eskişehir n'ihi ọrụ ndị e ji arụ ọrụ nke ndọtị ndọtị trolley
Newgbọ okporo ụzọ ụgbọ elu New York na ụzọ ụgbọ elu